နီယူးသည့်အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုများအနီးတောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်နယူးဇီလန်ရှိကျွန်းတစ်ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏မြေဧရိယာ 100 စတုရန်းမိုင် (260 စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဖြစ်ပါသည်။ 1,700 ၎င်း၏အနီးစပ်ဆုံးလူဦးရေအဓိကအား Polynesian ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံတွေလေ့က၎င်း၏ရိုးရာအမည် "ပိုလီနီးရှား၏ရော့ခ်" ကိုရည်ညွှန်းအတွက် "ဟု The Rock က" အဖြစ်ကျွန်းကိုကိုးကားပါ။
နီယူးစည်းဝေးပွဲ၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူနှစ်ဆယ်အဖွဲ့ဝင်စည်းဝေးပွဲကဦးဆောင်နေတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်နယူးဇီလန်နှင့်အတူအခမဲ့အသင်းအဖွဲ့အတွက်၎င်း၏ပရီးမီးယားလိဂ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ပါလီမန်အဆောက်အ Alofi များ၏ရွာဖြစ်ပါတယ်။ Niuean နယူးဇီလန်၏နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်။
နီယူးရဲ့ဥပဒေရေးရာစနစ်သည်အင်္ဂလိပ်အဖြစ်များသည့်ဥပဒေ system ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ နီယူးက၎င်း၏စစ်ရေးကာကွယ်ရေးအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေးရာနယူးဇီလန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
နီယူး 1994 ၏ IBC အက်ဥပဒေနှင့်အတူကော်ပိုရိတ်ကမ်းလွန်ဥပဒေပြုပြဋ္ဌာန်း။ အာမခံနှင့်ကမ်းလွန်တစ်ဦးပြည့်စုံအကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်ဖို့ကျွန်းကို enable ယုံကြည်မှုဥပဒေပြဌာန်းဘို့ခွင့်ပြုခဲ့ဒီအက်ဥပဒေကိုမိတ်ဆက် ကုန်ပစ္စည်းများ.
• အဘယ်သူမျှမအခွန်: ယင်း၏နယ်နိမိတ်ပြင်ပတွင်နီယူးကော်ပိုရေးရှင်းတို့ကရရှိခဲ့သည်အားလုံးအမြတ်အစွန်းအခွန်ကောက်ကြသည်မဟုတ်။ သို့သော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်ရသောအခွန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေနိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များထံ၎င်းတို့၏ဝင်ငွေအစီရင်ခံရန်လိုအပ်သည်။
• အဘယ်သူမျှမတံဆိပ်ခေါင်း Duty: နီယူးက၎င်း၏ကော်ပိုရေးရှင်းတို့က၎င်း၏တိုင်းပြည်တွင်တင်သွင်းကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်အပေါ်တစ်ဦးတံဆိပ်ခေါင်းခွန်စည်းကြပ်ခြင်းမရှိပါ။
• အင်္ဂလိပ်ရေပန်းစားသည်: ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများမဆိုဘာသာစကားမှာဖြစ်နိုင်ပြီး, အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်လိုအပ်ပါသည်နေစဉ်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကဒီကအရမ်းအဆင်ပြေဖြစ်ရှာပါ။
• ဆောင်လုလင်အစုရှယ်ယာခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်: နီယူးကော်ပိုရေးရှင်းအစုရှယ်ယာရှင်များ၏တွေရဲ့ privacy အဘို့အဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာထုတ်ပေးခွင့်ရှိပါသည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: နီယူးတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးနိမ့်ဆုံးတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တစ်ဦးတည်းသာညွှန်ကြားရေးမှူးလိုအပ်ပါသည်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်စေသဘာဝလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ကော်ပိုရေးရှင်းနိုင်ပါတယ်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: နီယူးကော်ပိုရေးရှင်းကသူတို့ရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများအများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွက်အမည်ရှိရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
• အဘယ်သူမျှမအခွန် Returns: နီယူးနှစ်စဉ်အခွန်ပြန် file ရန်၎င်း၏ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းမလိုအပ်ပါဘူး။ တစ်ခုတည်းသောနှစ်ပတ်လည်ဖိုင်ကော်ပိုရိတ်သက်တမ်းတိုးကြေးဖြစ်ကြသည်။
• လျှို့ဝှက်: ဆွဲသွင်းပါဝင်ပြီးနောက်ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်အခြားသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုအတွက်မဆိုစသောအပြောင်းအလဲမှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
• ဘယ်နေရာမှာမဆိုအဘယ်သူမျှမနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးများ: ကော်ပိုရေးရှင်းနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးများမလိုအပ်ပါ။
• အနိမ့်သက်တမ်းတိုးကြေး: နီယူးကော်ပိုရေးရှင်းမှသာသူတို့ရဲ့နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေးများအတွက် $ 150 အမေရိကန်ဒေါ်လာပေးဆောင်။
နီယူးကော်ပိုရေးရှင်းကိုအခြားပြီးသားရှိပြီးသားကော်ပိုရေးရှင်းမှမှတ်ပုံတင်မထူးခြားတဲ့အမည်အားကောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အမည်များကိုလည်းတာဝန်ခံအခမဲ့ 72 နာရီ reserved နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတျ, အမည်များကိုသေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေပေးဆောင်ပြီးနောက်ရက်သုံးဆယ်ပတ်လုံးအဘို့သိုထားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ခြင်းအခါလက်တင်အက္ခရာကိုအသုံးပြုရပါမည် နာမတျောကို.
အောက်ပါစကားလုံးများကိုမသုံးနိုင်သည်အာမခံချက်, အဆောက်အအုံလူ့အဖွဲ့အစည်း, ဘဏ်, ကုန်သည်ကြီးများ, သမဝါယမ, Chartered ဘဏ်, Imperial, စည်ပင်သာယာ, အာမခံ, တော်ဝင်သို့မဟုတ် Trust မှကုမ္ပဏီ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခု equivalents, ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ။
နီယူးကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ process ကိုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဒေသခံတစ်ဦးရုံးလိပ်စာနှစ်ခုလုံးရှိသည်ရန်လိုအပ်သည် တောင်းဆိုမှုများ နှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကသတိပေးချက်။
နီယူးကော်ပိုရေးရှင်းအနည်းဆုံးရှယ်ယာရှင်ရှိရမည်။ ရှယ်ယာရှင်များ၏တစ်ဦးကအစိုးရမှတ်ပုံတင် optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာလည်းဘို့အခွင့်ပြုခဲ့ကြသည် နီယူး ကော်ပိုရေးရှင်း။
နီယူးကော်ပိုရေးရှင်းအနည်းဆုံးဒါရိုက်တာရှိရမည်။ ဒါရိုက်တာရှယ်ယာရှင်များဖြစ်နိုင်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးကအစိုးရမှတ်ပုံတင် optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။
နီယူးကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ပုံမှန်အခွင့်အာဏာမြို့တော် $ 10,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏ 10,000 ရှယ်ယာဖို့၌ဝေဖန် $ 1 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှယ်ယာမြို့တော်မဆိုငွေကြေး, ဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးအရောအနှောအတွင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ မြို့တော်ထုတ်ပေးနိမ့်ဆုံးအဘယ်သူမျှမတန်းတူတန်ဖိုးကိုသို့မဟုတ်တန်းတူများထဲမှရှယ်ယာများထဲမှရှယ်ယာဖြစ်ပါသည် အဘိုး.
နီယူးကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်နှစ်ပတ်လည်မှတ်ပုံတင်ကြေးပုံမှန်အား $ အကြောင်းကိုကုန်ကျ150 အမေရိကန်ဒေါ်လာ။
အစိုးရကနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အမည်များမှတ်ပုံတင် optional ကိုဖြစ်သကဲ့သို့နီယူးကော်ပိုရေးရှင်းအဘို့, အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်ဒါရိုက်တာများ, ဒါမှမဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များအဘယ်သူမျှမထုတ်ဖော်ရှိသေး၏။
နီယူးကော်ပိုရေးရှင်းကုမ္ပဏီထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ထိန်းသိမ်းရန်နှစ်ပတ်လည်ပြန် file ရမယ် အဆင့်အတန်း။ သို့သော်ကော်ပိုရေးရှင်းပုံမှန်အားဖြင့်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများ file မှမလိုအပ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ကော်ပိုရေးရှင်းသူတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများနှင့်အရောင်းအခြေရာခံစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်။
ဒေသခံနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးများဘို့မလိုအပ်ပါ နီယူး ကော်ပိုရေးရှင်း။
နီယူးထဲဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုမှငါးရက်အတွင်းသကဲ့သို့နည်းနည်းခုနှစ်တွင်ပြီးစီးရမည့်ခန့်မှန်းရသည်။ သို့သော်ဖိုင်တွေနဲ့ turnaround တစ်ခါတစ်ရံအမည်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်နှင့်မည်သို့ကော်ပိုရေးရှင်းစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ချက်များကိုပြီးဆုံးနှစ်ဦးစလုံးပေါ် မူတည်. ကြာနိုင်ပါတယ်။
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်နီယူးအတွက်ရရှိနိုင်ပါ မြန်မြန် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း။
မရှိအခွန်ပြန်လာဖိုင်များ, အဘယ်သူမျှမတံဆိပ်ခေါင်းခွန်, privacy ကို, တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း, အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၏ကျော်ကြားမှု, တစ်ဦးအနိမ့်အခွင့်အာဏာမြို့တော်လိုအပ်ချက်, လိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးများ, ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာမျှကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ်ဝင်ငွေအခွန်နှင့်: နီယူးအပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်က၎င်း၏ကော်ပိုရေးရှင်းကမ်းလှမ်း အနိမ့်သက်တမ်းတိုးကြေး။